घर एशियाई-ओशियनियन फुटबल स्टोरीहरू टर्की फुटबल खेलाडीहरू सेन्सर तोसुन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
LB एक फुटबल जीनियस को पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा सबैभन्दा परिचित छ "पासा“। हाम्रो केन्क तोसुन बचपन कहानी प्लस बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ। विश्लेषण प्रसिद्धी, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र अन्य धेरै अफ-पिच तथ्यहरू (कम ज्ञात) अघि उनको जीवन कहानी समावेश छ।
हो, सबैलाई थाहा छ ऊ फुटबलको हो 'स्मार्टफोन'स्ट्राइकर जसले दुबै खुट्टा र टाउको प्रयोग गर्न सक्दछ। जे होस्, केवल केहिले सेन्क तोसुनको बायो मा विचार गर्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Cenk Tosun बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सेन्क तोसुनको जन्म June जून १71991 १ को जर्मनीको वेत्ज्लरमा भएको थियो। उहाँकी आमा सेल्मा तोसन (अमेरिकी परिवारको पृष्ठभूमिबाट) र बुबा, Şenol तोसुनको जन्म भएको थियो। तल उसको जर्मन आप्रवासी अभिभावकको फोटो छ।
जर्मनीको टर्की डासार्पामा उनको बहिनी, आइज़न टोसुन र चाचा तनरको साथ टोसन ठूलो भयो। त्यसपछि, Tosun एक साथ आफ्नो पिता, माम, बहिनी र चाचा साथ Wetzlar मा Lahn नदी अनदेखी एक घर मा बस्ने।
तोसुनका अभिभावकहरू त्यस देशमा आउनेहरू मध्येका थिए Gastarbeiter (वा 'अतिथि कर्मचारी') १ 1970's० को दशकमा। तोसुनकी आमा, सेल्मा मूल रूपमा आन्काराका र उनको बुबा डेनिजलीको एजियन शहरका हुन्। यसको अर्थ हो टोसुन जर्मन जन्मले तर टर्की मार्फत र मार्फत.
बुबाको विफलता र सपना: तोसुन बुबाको सपना भनेको बाल्यकालदेखि नै फुटबलर बन्ने थियो। दुर्भाग्यवश, १Ş वर्षको उमेरमा इनोलले आफ्नो फुटबलको आशा त्यागे। थेइस यस तथ्यको कारण हो कि ऊसँग कुनै आर्थिक सहयोग छैन र ऊ अझ राम्रो जागिर पाउन र पैसा कमाउन चाहान्थ्यो आफ्नो साना भाई, टेनरको हेरचाह गर्न। जब उनले काम गर्न सुरु गरे, उनले आफ्नो भावी छोरा बनाउने कसम खाए (यस अवस्थामा; Cenk Tosun) एक पेशेवर फुटबलर बन्नुहोस्। आउनुहोस्, उसले त्यो कसरी गर्यो।
Cenk Tosun बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -क्यारियर बिल्डअप
त्यस पछि, प्रत्येक दिन, Tosun बुबा आफ्नो कामबाट फर्कदा, उनी आफ्नो छोरा, Tosun उनको लामो कुर्सीको दायाँ-दाहिने पट्टि र अर्कोपट्टि, आफ्नो भाइ, Taner (Tosun काका) को लाग्छ। ती सबैले टेपहरू हेर्न थाल्नेछन् गब्रिएल बैटिस्टाटा, एक प्रसिद्ध अर्जेन्टिना स्ट्राइकर जसको बचपनको कथा हामीले लेखेका छौं। Olenol तोसुनले आफ्नो छोरालाई आफ्नो भाग्य फ्यूज गर्ने तरिकाको रूपमा अर्जेन्टिनाको भिडियो फेरि हेर्नको लागि अनुमति दिनेछन्।
एक्शन समय अन्त भयो, पल सिनेलले आफ्ना सपनाहरू सुरू गर्न थाले। एक दिन सिनेलले आफ्नो छोरो बगैचामा बिर्सेर उसलाई यसो भने।
“छोरो, म तिमीलाई केहि भन्न चाहन्छु। म तपाइँ मेरो लागि गेब्रियल बाटिस्टाटा जस्तै खेल्न चाहन्छु "
तोसुनका बुवाले आफ्नो छोरालाई दृढ खुट्टा दिन शुरू गरे किनकि उसको खेल खेल्ने अनुरोध भयो Batigol। उनको उमेर3(१ 1994 XNUMX age) को उमेरमा फुटबलको चाहना विकास भएको देखेर, Şनोल तोसुनले आफ्नो छोरालाई स्थानीय युवा टोलीको रोस्टरमा भर्ना गर्ने निर्णय गरे, SV 07 Raunheim जसले उनलाई चरणमा आफ्नो प्रतिभा को प्रदर्शन गर्न को लागि दिए।
Years बर्षसम्म क्लबमा विकास गरेपछि, उनका आमाबुबाले आफ्नो छोरालाई एक लोकप्रिय क्लबमा अझ विकसित गर्ने बारेमा सोच्नुभयो। यसबाहेक, तोसुन (तल चित्रमा) एन्ट्राक्ट फ्रान्कफर्टको युवा प्रणालीमा सफल परीक्षण थियो।
Cenk Tosun बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -बुबालाई अल्टिमेटम
एन्ट्राक्ट फ्र्याf्कफर्टमा फुटबल गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्ने, सेन्क तोसनले उनका बुवासँग व्यक्तिगत प्रशिक्षण पनि राखेका थिए जसलाई उनले फुटबलसँग सम्बन्धित शव्दको हरेक अर्थमा कडा वर्णन गरे। यो एउटा ब्यबहार हो जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि एक युवा टोसनले अनुशासित थियो जब उसले फुटबल गल्ती गर्छ। एक दिन, Şenol Tosun आफ्नो छोरा सोधे;
यसबाहेक, म तपाईलाई केवल आफ्नो बायाँ खुट्टा र आफ्नो टाउको साथ पनि गोली मार्न चाहन्छु
निस्सन्देपण गरेर, सेनोल टोसनले थप गरे र आफ्नो छोरोलाई बायाँ बलियो बनाउन बोलीमा केही समयसम्म दाँयाबाट शूटिङबाट निषेधित वा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। जस्तै रस बर्कले र पेडोरो Rodriquez, सिङ्क अब बायाँ खुट्टा र टाउकोको मालिक हो।
Cenk Tosun बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -युवा असहमति
यो 20 वर्षको उमेरमा उनको युवा युवा क्लबमा एक दशक भन्दा बढी खर्च पछि फुटबलमा इन्कार गर्न यो दुखद छ। यो सिन्क टोसनको अवस्था थियो जसले आफ्नो जीवनमा घोर बिन्दु देखेपछि फ्रान्सफर्टसँग वरिष्ठ फुटबलमा दुई स्नातकोत्तर पछाडि उनको स्नातकोत्तर रद्द गरे पछि। यसको बारेमा बोल्दै, उहाँले एक पटक भन्नुभयो।
"म १int बर्ष एन्ट्राक्टमा थिएँ, मैले मेरो युवा समूहका प्रशिक्षकलाई मेरो बुबाभन्दा धेरै पटक देखेको थिएँ," उनले भने। “म आफ्नै बेडरुमको भन्दा अक्सर आइन्ट्राक्ट लॉकर कोठामा थिएँ। म क्लब मेरो मुटुमा बोक्छु, मलाई लाग्छ म वरिष्ठ फुटबलको लागि योग्य छु। वरिष्ठ टोलीबाट बाहिर रहनु दुखद छ। म कहिल्यै छोड्न चाहन्नथें। ”
दुःखको कुरा, यो युवती टोलीको लागि एक गोल गोल स्कोर भए पनि यो भयो। एक दुई सीजनको प्रतीक्षा पछि, उनीहरूले खाना खाए र जर्मनी छोडेनन्। Tosun उनको परिवार र साथीहरूलाई जर्मनीमा पछाडि छोडेर दक्षिण पूर्व टर्कीको गेजिमेपपपपपबाट एक प्रस्ताव ल्याउनको लागि जहाँ उनको वरिष्ठ क्यारियर बन्द भयो। क्लबमा, उहाँले आफ्नो खुट्टा लगभग चाँडै भेट्नुभयो।
Cenk Tosun बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -सफलता
गाजियान्टेस्पोरका लागि दुई सत्रमा goals goals गोल गरिसकेपछि तोसुनले आफ्नो स्थानको लागि लड्न ठूलो क्लबमा सर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे। Beşiktaş आफ्नो गन्तव्य बने। क्लबसँग उसको पहिलो दुई सत्रहरूमा टोसनले प्रतिस्पर्धा गर्‍यो दुम्बा बा र मारियो गोमेज पेकङ अर्डरमा। तिनका शब्दहरूमा
"मैले डेम्बा बा र मारियो गोमेजबाट धेरै कुरा सिकेँ," उनले भने। "उनीहरूमार्फत मैले विकास गरेँ र धेरै अनुभव पनि प्राप्त गरे।"
उनको दोस्रो सेकेन्डपछि, टोसनले पछिल्ला चरणमा गोल गरे, एक्सएनएमएक्स लक्ष्मी गोल गर्दै स्कोर गरे र पाँच सहयोग उपलब्ध गराएपछि Besiktas एक दोस्रो सुपर सुपर लिगमा जित्यो। पछि, उनले आफ्नो लक्ष्य बढ्यो, आफ्नो वारियर्स पार गर्नुहोस् र पूर्णतया शुरुवात XI मा तोडफोड गर्यो। Tosun ले दुई सत्रहरु को लागि क्लब को लागि 21 लक्ष्य बनाए।
उपनामको उत्पत्ति: लक्ष्य को स्कोर गर्दा Tosun स्नेह देखि आफ्नो देश मा nickname "पासा", एक ओमानमन शब्द जो सामान्यतया तुर्क साम्राज्य सैन्य प्रणालीमा उच्च स्थान संग कसैलाई अनुवाद गर्दछ।
उनको लक्ष्य बटिंग फार्म एवटन को आकर्षित गरे जो जनवरी 2018 ट्रांसफर विंडो मा उनको पछि गए। तपाईले थाहा पाउनुभयो ?? .. Everton एक शुल्क तिर्नुभयो जो एक ज्यादै 50 गुणा भनेको त्यो शुल्कको तुलनामा अधिक हुन्छ जसमा यसले गेजिनपपपपप र Besiktas को लागत Tosun मा हस्ताक्षर गर्न। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
Cenk Tosun बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
प्रत्येक महान पुरुषको पछाडि, त्यहाँ एक महान महिला, वा यस्तै भनाइ छ। र लगभग हरेक सफल जर्मन टर्की फुटबलरको पछाडि (तिनीहरूलाई नाम दिनुहोस्; Mesut Ozil, İlkay Gündoğan र हाम्रो आफ्नै आफ्नै केन्क तोसुन आदि), त्यहाँ एक ग्लैमरस वैग वा प्रेमिका छ।
यो Ece Akgürbüz को व्यक्तिमा देखिन्छ जुन सेन्क तोसुनसँग दीर्घकालीन सम्बन्धमा रहेको थियो। Ece Akgürbüz सेन्क संग उनको २०१ year को सफलता वर्षको बखत विवाह भयो।
तल उनीहरूले विवाहको भाँडो साटासाट गरेको समयमा तिनीहरूको विवाहको फोटो छ। दुबै माया मा यती देखिन्छन्।
जोडाले इन्स्टाग्राममा सयौं स्वयंसेवाहरूको लागि प्रस्तुत गरेको छ र एकअर्कासँग पूर्णतया बखत देखा पर्यो।
विवाह भएदेखि, फ्यानहरूले तिनीहरूलाई लास भेगास, लस एन्जलस र न्यू योर्कलगायत विश्वभरका हटस्पटहरूमा यात्रा गरेको चित्रण गर्न।
तिनीहरू सँधै तस्वीरहरूमा देखिन्छ जुन उनीहरूको जीवनको मजा लिदै प्रदर्शन गर्दछ। एक उदाहरण तल देखाइएको छ।
तल सेन्क तोसुन र उनकी श्रीमतीको डु photo्गामा क्रूजमा अर्को फोटो छ। एक छुट्टिने तरीका उसको बिदा खर्च गर्ने।
जोडाको अर्को फोटो फ्यानसी रेस्टुरेन्ट र क्लबहरूमा यो ठूलो बनिरहेको छ।
हालसालै उनीहरू दुबै लन्डनको अक्सफोर्ड स्ट्रीटमा हातहतियार पाएका थिए र अब उनीहरूले घर बोलाउने देशको साथ पक्राउ गर्न खोजे।
Cenk Tosun बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -गला-स्लिटिङ इशारा
टेलिभिजनका लागि सेन्स्क टोसनलाई समर्थकले आफ्नो पितामाथि आक्रमण गर्दा टर्कीको लागि पठाइएको थियो जब उनी विश्व कप क्वालिफायरको खेल खेले।
अगाडि पिच छोड्न पछि पछाडि छोड्न पछि सिधा रातो कार्ड देखाइएको थियो जुन उजुरीका साथ उनको परिवारमा हमला गर्ने प्रयास गरेका थिए। तुसोनले बोलेका थियौं।
तोसुनका बुबा र परिवारका अन्य सदस्यहरू कथित प्रशंसकहरू द्वारा राखिएको आगोको ज्वालाले मारिएका थिए र उनले बुझेका थिए पूर्ण क्रोधको साथ। आफ्नो क्रोध र क्रोधको कारण, तोसुनलाई उसको टोलीका साथीहरूले बलपूर्वक रोक्नुपर्‍यो। वास्तवमा ऊ जे देख्यो त्यो देखेर अत्यन्तै दुखी थियो। भिडियो तल हेर्नुहोस्;
खेल पछि, Tosun एक बयान जारी गरे कि उनले आफ्नो प्रतिक्रिया माफी दिए, दावा गर्दछ कि कप्तान कसरि व्यवहार गर्नु पर्छ। उनको टर्की आउटलेट अखबारको साथमा उनले भने,
“जब मेरो टाउको फर्किएँ, मैले मेरो बुबा र केही फ्यानहरूसँग झगडा गरेको देखें। मलाई डर थियो कि ऊ उनीहरूसँग भएको आगोबाट उसले चोट पुर्‍यायो। म गलत थियो किनकि मलाई सम्पूर्ण कथा थाहा थिएन। चरित्र फुटबल भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। यो एक अप्रिय इशारा थियो। म माफी चाहन्छु। म ग्यारेन्टी गर्छु कि यस्तो फेरि हुँदैन। "
Cenk Tosun बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -माइकल जोर्डन फ्यान
Cenk एनबीएलाई हेर्दै माया गर्छ किनकि उसले माइकल जोर्डनको एक ठूलो प्रशंसक हो र उनको एनबीए नम्बर 23 शर्ट जुन शिकागो बुल्स को लागी किंवदंती पहने थियो।
केहि समय अगाडि Beşiktaş मा एक सिजनको सुरूमा। मारियो गोमेजलाई क्लबको व्यवस्थापनले भनेको थियो कि;
“अल yours तपाईंको हो। कृपया शर्ट नम्बर स्वीकार गर्नुहोस् "
तर Tosun ले भन्यो;
“होइन। मलाई9नम्बरको शर्ट चाहिएको छैन। मेरो नम्बर २ is हो! "
Fअधिनियम जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो केन्क Tosun बचपन स्टोरी प्लस अनौपचारिक जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईंले केहि देख्नु भयो जुन यस लेखमा ठिकै लाग्दैन भने, कृपया तपाईंको टिप्पणी दिनुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
टर्की फुटबल डायरी